အခမဲ့ FASTCOPY DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အဓိက Program ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
MSIEXEC.EXE - တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့ PC မှာထည့်သွင်းနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်။ ရဲ့လို့သူကပြောပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ခြင်းနှင့်သင်ကပိတ်ထားနိုင်ရှိမရှိကြပါစို့။
MSIEXEC.EXE နဲ့ tab ထဲမှာမွငျနိုငျ "လုပ်ငန်းစဉ်" Task Manager ကို။
MSIEXEC.EXE system ကိုအစီအစဉ်ကို Microsoft ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်။ ဒါဟာ Windows Installer ဟာ MSI သည် format နဲ့ဖိုင်ကိုထံမှအသစ်သောအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
MSIEXEC.EXE အလုပ်သင် installer ကို run တဲ့အခါမှာစတင်, သူသည် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရဲ့အဆုံးမှာရပ်စဲခံရသင့်ပါတယ်။
ကို C: Windows System32
သငျသညျနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ် "ပွင့်လင်းဖိုင်တည်နေရာ" အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ Context Menu ကမှ။
ဒါက EXE-ဖိုင်ရှိရာ folder ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏စစ်ဆင်ရေးရပ်တန့်ဖို့အထူးသဖြင့်လာသောအခါသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ဆော့ဖ်ဝဲ, အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ထိုကြောင့်, ကဖိုင်တွေဖြည်ကြားဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီးအသစ်က program ကိုဖြစ်ကောင်းအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမှန်လျှင်, သို့သော်ရှိသေး MSIEXEC.EXE ပယ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်း, ထို့နောက်သူကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်:
အဆိုပါ Task Manager ကိုစာရင်းထဲတွင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
စာနယ်ဇင်းများ "End Process ကို".
သတိပေးစာကိုဖတ်ရန်, တဖန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "End Process ကို".
မကြာခဏ MSIEXEC.EXE သောစနစ်အားစတင်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်စတင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းစစျဆေးဖို့လိုအပ် "ဒီက Windows Installer" - ကို default ကို manual စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေအချို့အကြောင်းပြချက်ကအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
program ကို run "Run ကို"သော့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း ဦးဝင်း + R ကို.
ညွှန်ပြ "services.msc" နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ "ဒီက Windows Installer"။ ကော်လံအတွက် "Startup စာမျက်နှာအမျိုးအစား" ၏တန်ဖိုးဖြစ်သင့် "ကိုယ်တိုင်".
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၎င်း၏အမည်ကိုအပေါ်ကို double-click လုပ်ပါ။ ရလဒ်ဂုဏ်သတ္တိများ box ထဲမှာ, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို MSIEXEC.EXE executable file ကိုမှပြီးသားအကျွမ်းတဝင်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. တွေ့နိုင်ပါသည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Stop", ရန် startup type ကိုပြောင်းပေးပါ "ကိုယ်တိုင်" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဒါကြောင့်သင့်ပါတယ်အဖြစ်သင်သည်တစုံတခုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအပြေးနေသည် install လုပ်မထားဘူးဆိုရင်, ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုး MSIEXEC.EXE အဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အခြား feature များအကြားနေသောခေါင်းစဉ်:
executable file ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဖိုင်တွဲထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲများဖယ်ရှားပစ်ရ, ဥပမာတစ်ခုက Antivirus program နဲ့ Dr.Web CureIt သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံ mode မှာဖိုင်ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲသည့်စနစ်ပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်သင်ကဗိုင်းရပ်စ်နှင့်မဖိုင်တစ်ဖိုင်ကြောင်းကိုသေချာဖြစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site တွင်သင်သည်လုံခြုံ mode ကို Windows 8 နှင့် Windows 10 မှာ Windows XP ကိုစတင်ရန်ဘယ်လိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: antivirus ကိုမပါဘဲဗိုင်းရပ်စ်အဘို့သင့်ကွန်ပျူတာစကင်ဖတ်
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသင် extension ကို MSI နှင့်အတူ installer ကို run တဲ့အခါမှာ MSIEXEC.EXE အလုပ်လုပ်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤကာလအတွင်းကပြီးအောင်မှမ သာ. ကောင်း၏။ ဝန်ဆောင်မှုမမှန်ကန်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်နိုင်တဲ့ Run "ဒီက Windows Installer" ဒါမှမဟုတ် PC ကို malware များအတွက်ရှိနေခြင်းကြောင့်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌အချိန်မီထုံးစံ၌ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Second copy shoes market. Shoes at 55-Rs only. slippers and sports shoes. VANSHMJ (စက်တင်ဘာလ 2019).
https://termotools.com my.termotools.com © Program ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 2019